WordPress Plugin: PostPost (နောက်ဆုံးသတင်း) | Martech Zone
WordPress Plugin: PostPost (နောက်ဆုံးအခြေအနေ)
တနင်္ဂနွေ, ဖေဖော်ဝါရီလ 18, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
PostPost - စိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာများကိုသင်၏ဆိုဒ်တွင် (သို့) သင်၏ထည့်သွင်းမှုတစ်ခုစီ၌နှင့်အပြီးပို့ရန် WordPress ပလပ်ဂင်တစ်ခု။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကြော်ငြာပြီးကြိုးစားပြီးစိတ်ပျက်လာတဲ့အခါဒီ plugin ကိုရေးခဲ့တယ်။ ဒါဟာကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံး 'ပြည့်စုံတဲ့ plugin' ပါ၊ ဒါပေမယ့်သူကအရမ်းသန့်ရှင်းစွာရေးထားတာလို့ထင်ပါတယ်။ ငါတကယ်အသုံးချ Plugin ဗိသုကာထွက်နေသေးတယ် ရိုးရှင်းသောအတွေးများ 'မူပိုင် Plugin။ ငါဆောက်လုပ်ရေးအသုံးပြုသွားမည် Ryan Duff's ပိုမိုကောင်းမွန်စွာရေးသားနိုင်ရန် WP Contact Form plugin ၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နှင့်လေ့လာရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော plugin တစ်ခုဖြစ်သည်။
Douglas Karr Sunday, February 18, 2007 Tuesday, October 4, 2011
WordPress - WordPress ကိုအလိုအလျောက်ထုတ်ပြန်သည်
17:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 2, 26 တွင်
Doug - ဒီဟာကကောင်းတယ် ငါလုပ်နေတာတစ်စုံတစ် ဦး ၏မျှော်လင့်ချက်အတွက်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ရေးသားခြင်းကိုချွတ်ပယ်ခဲ့သည်။ ငါကြော်ငြာမထားဘူး, ဒါပေမယ့်အချို့သောအစာကျွေးပစ္စည်းသာတက်လာမယ့်ရှိဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ ဒါကပြီးပြည့်စုံတဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
17:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 3, 44 တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုနီ! ငါလာမယ့်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ Admin interface နဲ့အဆင့်မြှင့်တင်မယ်။ ငါ Plugins ရေးသားခြင်းတွင်အသစ်ဖြစ်၏၊
18:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 47 တွင်
FYI တစ်ခုသာကျွန်ုပ်ပလပ်ဂင်ကိုပြန်လည်ရေးပြီးထပ်မံတင်ပြခဲ့သည်။ မူရင်းဟာအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် upgrade မှာ full admin interface ရှိတယ်။ ငါဒီ post ကိုပြန်ပို့လိုက်ပြီ
18:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 51 တွင်
အေးမြ။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ပျော်စရာနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောတနင်္ဂနွေ had ရှိခဲ့သည်
18:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 55 တွင်
ဒါ! ကျွန်တော့်ရဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုက ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွက်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ပလပ်အင်ကိုခြစ်ရာကနေရေးဖို့ပဲ။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူများ၏ပလပ်ဂင်အမြောက်အများကိုပြုပြင်ပြီးပါပြီ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုတွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ Google ကြော်ငြာကိုပို့စ်တစ်ခုစီအောက်တွင်သာမက RSS Feed ကြော်ငြာများအတွက်ပါအသုံးပြုသည်။
ပျော်စရာပစ္စည်း ... နှင့်2ရည်မှန်းချက်များချ! (ကျွန်ုပ်၏အခြားသူတစ် ဦး မှာ Technorati ရှိထိပ်တန်း ၅၀၀၀ ထဲကို ၀ င်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါပြီးသွားပြီ၊ သို့သော်၎င်းသည် Z-List ရေးသားချက်များ၏အကူအညီဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ငါမကျင်းပမီကစာရင်းဇယားများပြတ်တောက်သွားလိမ့်မည်။ ။
18:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 7, 20 တွင်
DOH! ငါသည်လည်းစာမျက်နှာပို့စ်များပေါ်တွင်ပေါ်လာကြောင်းသတိပြုမိသည် ... ဒါကြောင့်ငါကပြုပြင်မွမ်းမံရုံ 1.1.1 ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ငါလွှတ်ပေးတဲ့အမြန်နှုန်းစံချိန်တင် ယခုတွင်သင်သည်အကြောင်းအရာကိုစာမျက်နှာမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်တွင်လည်းပြုပြင်နိုင်သည်။
19:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 2, 08 တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဂူဂဲလ် AdSense ကစာမျက်နှာတစ်ခုစီမှာကြော်ငြာ (၄) (၅?) ကန့်သတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ပို့စ်တစ်ခုချင်းစီအပြီး / မတိုင်မီ AdSense ကုဒ်ကိုထည့်ပြီး၊ ၅ ခုထက်ပိုသောရွေးချယ်စရာရှိပါက စာမူတစ်ခုချင်းစီကိုကြည့်လျှင်၊ သီအိုရီအရပြanနာရှိနိုင်သည်။
တိုင်ကြားချက်ဟုမဆိုလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုနောက်ထပ်အသုံးမပြုတော့ပါ (ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုရပ်စဲသည်။ )
19:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 5, 58 တွင်
ငါခရစ်အပေါ်စစ်ဆေးသွားမယ်! ငါကျပန်း၏စိတ်ကူးနှင့်အတူ 'ကစားစရာ' ဖို့ကြိုးစားနေနှင့်ဤအဘို့အ nth နေရာချထား။ ငါသည်လည်း header နှင့် footer စိတ်ကြိုက်အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်။ ပလပ်အင်ကိုကောင်းစွာရေးထားသည် (ကျွန်ုပ်သည်အခြားကောင်းမွန်သောရေးသားထားသော plugins များမှအခြားအဆောက်အအုံများကို 'ချေးယူသည်') ဆိုပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဆက်လက်ချဲ့ထွင်သွားမည်။
20:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 12, 47
အိုကေ၊ အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အလျင်အမြန်ပြန်ကြားချက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
20:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 8, 51
သူတို့ဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာမသေချာဘူး ပေါ်လစီစာမျက်နှာ အကောင်အထည်ဖော်သင့်သည်။ ကြော်ငြာ ၂ ခုအထိရှိနိုင်သည်ဟုဖော်ပြထားသည် ထုတ်ကုန်နှုန်း။ ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ ဥပမာ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်စာမျက်နှာတစ်ခုစီတွင်ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာတစ်ခုရှိသည့်စာမူ ၈ ခု (ထုတ်ကုန်များ) ရှိလျှင်သူတို့၏မူဝါဒကိုငါချိုးဖောက်သည်ဟုမထင်ပါ။
ငါကတစ်စာမျက်နှာလျှင်4ဖော်ပြထားဘယ်မှာအဟောင်းကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမြင်ခဲ့တယျ - ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုကြာမြင့်စွာသွားပြီပုံရသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေများကြောင့်။ စိတ်ဝင်စားစရာ! တစ်ခါတလေကြော်ငြာဆိုတာသတိထားမိတယ် မဟုတ် ဇာတ်ညွှန်းကထုတ်ပေး - သူတို့ထဲမှာ built-in အတွင်းပိုင်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရားရှိမရှိငါတွေးမိ။
20:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 1, 53 တွင်
ဧပြီ 8, 2007 မှာ 2: 52 pm တွင်
ဟိုင်းပြန်ပါ သင့်ရဲ့ e-mail အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, တုံ့ပြန်ရန်ဤမျှကာလပတ်လုံးယူအတွက်တောင်းပန်။
တောင်းဆိုမှုတစ်ခုနှင့် bug နှစ်ခု။
ကောင်းပြီ၊ အမှားအယွင်းများသည်ကျွန်ုပ်၏အဓိကအကြောင်းအရာသို့ရောက်သွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်မသေချာပါ။
၁ - ပို့စ်များအကြားကြော်ငြာထည့်သွင်းမှုအကြိမ်ရေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြော်ငြာများအလွန်များနေသည်ဟုခံစားမိပါသည်။ တင်ထားသည့် post မရှိသော post နံပါတ်များကို WP တွင်ပြန်လည်အသုံးမပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်မူကြမ်းတစ်ခုကိုရေးသည်၊ အခြားပို့စ်အနည်းငယ်တင်ပြီးနောက်ထိုမူကြမ်းကိုဖျက်ပစ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ပို့စ် # များတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ခြင်းအတွက်အခြားအကြောင်းပြချက်မရှိပါကသင်သည် ၄၃၁,၄၃၃,၄၃၄ ကဲ့သို့သောအစီအစဉ်တကျနှင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ POST_AD_POST_POST_AD_POST_POST ပုံစံအပြင်အဆင်မျိုးကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်မည်မျှလွယ်ကူသည်ကိုသေချာမသိပါ။
2 - (တစ်ခုတည်းသော) ကျွန်ုပ်၏အမျိုးအစားများကို နှိပ်၍ ပို့စ်များကိုကြည့်သောအခါကြော်ငြာကုဒ်ကိုအနက်ဖွင့ ်၍ မရပါ - ၎င်းသည်ပို့စ်တိုများတွင်သာတွေ့ရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ် website ကိုသွားပြီးပုံအမျိုးအစားများကိုကလစ်နှိပ်ပါကပထမရေးသားချက်သုံးခုသည်ကုဒ်ကိုဖော်ပြသည်။ ရလဒ်ကိုမဟုတ်ပါ။
၃ - footer section တွင်ကြော်ငြာများတောင်းသည့်အခါအလုပ်မဖြစ်ပါ။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲဒီပြissuesနာတွေကငါအသုံးပြုနေတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာ (ဖြစ်နိုင်တယ်၊ အချိတ်အဆက်တခုအတွက် Anaconda၊ ကျနော့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးပါ) အထိဖြစ်လိမ့်မယ်။ ခဏလေးမှမင်းရဲ့အကြံဥာဏ်ကိုရယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်…
ဧပြီ 12, 2007 မှာ 12: 13 AM
အမျိုးအစားလင့်ခ်များမှတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုသည့်အခါစာတိုတိုများ၏အသွင်အပြင်ကိုစာဖတ်သူများစွာကမှတ်ချက်ချသကဲ့သို့ငါ per-post ကြော်ငြာများကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ်သာရှာလျှင်၊ ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊ ပြtheနာကိုခြေရာကောက်ရန်စိတ်ကူးလျှင် code ကိုထပ်ထည့်ပါ။
မေလ 29, 2007 မှာ 3: 52 AM
ငါဒီ post ကိုမကြာခဏစစ်ဆေးမထားဘူးလို့ထင်နေလား?
ယခုငါကြော်ငြာများကိုတူညီသောနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုခြင်းမရှိသေးပါ၊ သို့သော်အခြားသုံးစွဲသူများသည်ကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးဝင်နေ ဦး မလားဟုတွေးမိသည်။
မေလ 29, 2007 မှာ 7: 54 AM
Ooops! ဝမ်းနည်းပါတယ်ခရစ်။ ငါအကြောင်းပြချက်အချို့အဘို့ဤမှတ်ချက်လွဲချော်။ ငါစီမံကိန်းအတွက်ငါလုပ်ချင်သောတိုးတက်မှုများစွာရှိသည်, ငါပဲသူတို့ကိုလှည့်ပတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်!
မေလ 29, 2007 မှာ 11: 36 AM
np, မှတ်ချက်တွေကိုမင်းတွေ့ခဲ့ရလို့ဝမ်းသာပါတယ် သင်သည်အမျိုးအစားစာမျက်နှာများပေါ်တွင်မည်သို့ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းမရှိဘဲတစ်ခါတစ်ရံပြန်ဆိုခဲ့ကြသည်အီးမေးလ်ကိုရခဲ့သလား ဒါကိုနည်းပညာအရဘယ်လိုဖော်ပြသင့်တယ်ဆိုတာမသေချာပေမဲ့ကြော်ငြာမယ့်အစား html အစားအဲဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်။
ငါ့ဘက်မှအလျင်မရှိတောင်းခံခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်သည်အခြားအရာများနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ရှိနေသည်။
5:2008 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 3, 13
ယနေ့ PostPost 1.2.0 ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်! ၎င်းသည် WordPress ၏ is_single လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်စာမူတစ်ခုတည်းမတိုင်မှီသို့မဟုတ်အပြီးတွင်တစ်ခုခုတင်နိုင်သည်။
ငါသော်လည်း, ငါ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ရနိုင်ဘူး။ WordPress ၏ကူညီပံ့ပိုးမှုတွင်ကျွန်ုပ်သည်အခြားလူများသည်သူတို့၏ template နှင့် is_single လုပ်ဆောင်မှုတွင်ပြproblemsနာရှိသည်ဟုဖတ်နေသည်။ ဘာမှမချိုးဘူး၊ ဘာမှမပြဘူး။
မတ်လ 25, 2008 မှာ 6: 57 AM
ဒါဟာ (ငါ Big အပြာရောင်ဆောင်ပုဒ်ကိုအသုံးပြုပြီး) မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဖြေရှင်းဖို့အခွင့်အလမ်း? 🙂
10:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 3, 30 တွင်
Doug: ကောင်းတဲ့ plug-in - တိုပြီးရိုးရှင်းတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန် WordPress အခင်းအကျင်း (း ၁.၆) ကိုအသုံးပြုနေပြီး“ After Single Post on Page” option သည်မည်သည့်အရာမျှပြသပုံမပေါ်ပါ။
10:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 3, 40 တွင်
ကျွန်တော်မမြင်ဖူးဘူး is_single ဤအချက်၌ WordPress မှပြrectနာတက်သည် ငါကုဒ်မှာနှစ်ကြိမ်ယူသွားတယ်, ဒါပေမယ့်ငါ plugin ကိုအဆင်ပြေသေချာပါတယ်သေချာပါတယ်။
10:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 10, 25 တွင်
Doug: အမြန်ဆုံးပြန်ကြားချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါကြောင့်ငါမေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးခြင်း၏မကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ PostPost သည်ကျွန်ုပ်ဘလော့နှင့်အထူး post တစ်ခုဖော်ပြသော option နှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၌ပြissuesနာများရှိနေသည်။
သင်နှင့် ၂၀၀၈ အစပိုင်းတွင်ဤပြproblemနာကိုသင်နှင့်ဆွေးနွေးသူ (စကားလုံးတစ်လုံးတည်းလား) သည်ထင်ရသည်။
အဲ့ဒီတုန်းကပြaနာလား။ စာမျက်နှာပေါ်တွင်တစ် ဦး တည်း Post ပြီးနောက်? ဒီနေ့မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်လား။
ငါတစ်ခုခုမှားသွားပြီဆိုတာဝန်ခံဖို့ထက်ပိုပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပထမ ဦး ဆုံးငါကတခြားလူတိုင်းမှာတူညီတဲ့ပြproblemနာရှိလားဆိုတာစစ်ဆေးဖို့ပဲ။
မင်းရဲ့ကုဒ်ကိုကြည့်ပြီးပြီ၊ ဒါကကောင်းတယ်၊ သန့်ရှင်းတယ်၊ အခုငါ“ is_single” ကိုအပြစ်တင်နေတယ်။
ဒီဇင်ဘာ 17, 2008 မှာ 9: 19 AM
ငါ PostPost plugin ကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသည်နှင့်အကြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ငါ post တစ်ခုချင်းစီကိုမှမြှင့်တင်ရေးချထားပါ၏ဒါပေမယ့်ငါပြissueနာတစ်ခုရှိခြင်းဖြစ်၏။ မြှင့်တင်ရေးကိုကျွန်ုပ်ပိုမိုမှတ်သားထားသည့်အမျိုးအစား / ပင်မစာမျက်နှာတွင်ပြသထားပါသည်။ ပရိုမိုးရှင်းသည် READ MORE link ပြီးနောက်တွင်ပေါ်လာမည်။ ငါတို့အဲဒါကိုပြင်လို့ရတဲ့နည်းရှိသေးလား။ ပြီးနောက်နောက်ထပ်ပြသရန် link ကိုမပြပါ ??